Shir lagu jeex jeexayay arimaha Deegaanka ayaa maanta Bosaaso ka dhacay | maakhir.com
Shir lagu jeex jeexayay arimaha Deegaanka ayaa maanta Bosaaso ka dhacay
Bosaaso:- Shirkan ku saabsanaa nolosha iyo deegaanka ee maanta ka dhacay Boosaaso ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto,Saadaq Axmed Biixi wakiilka Hay’ada waddaniga ee Socda ee Puntland ayaa sheega in shirkan uu yahay kii lixaad horey loo qabtay.
Shirkaasi ayaa waxa soo qaban qaabiyay Ururka ka shaqeeyaan deegaanka ee Socda iyaga oo gacan ka helay Hay”adda RMSN oo iyana ka hawl gasha deegaanada Puntland waxana ka soo qayb galay Ururada bulshada rayidka ah iyo dhamaan Masuuliyiinta Gobolka Bari.
Ugu horayn waxa shirkaas ka hadlay Sadiiq Axmed Biixi wakiilka Ururkaasi shirka maanta qabtay ayaa sheegay inay shirkan ugu talo galeen inuu noqdo mid ay dadku oraah isku dhaaf sadaan si laysu waydiiyo qaabka kaliya ee loo bad baadin karo Deegaanka sii dabar go”aya.
Wakiilkaasi waxa uu sheegay inay shirkaas oo kale ay qabtaan sanad kasta kaasi oo looga gol leeyahay sidii kor loogu soo qaadi lahaa in dadka faah faahin dheeraad ah laga siiyo faa iidada deegaanka,isaga oo sabab uga dhigay dadkoo oo uu sheegay inay aad uga liitaan xaga ka hortaga Xaalufka.
Eng Axmed Ibraahim Guure Adan oo isna ku hadlaya Magaca Hay”adda RMSN ayaa sheegay inuu aad ugu farax san yahay inuu maanta ka soo qayb galo Kulan lagaga hadlayo arimaha deegaanka.
Mr Guure waxa uu ka dhawaajiyay faa iidooyinka uu leeyahay Deegaanka iyo sida aanay dadka qaarkiis u fahasanayn isaga oo sheegay in loo baahan yahay si wayn dhexda loogu xidho sidii wax looga qaban lahaa deegaanka oo loo baajin lahaa Kumanaanka Geed ee la shidayo.
Eng Guure waxa uu gabagabadii sheegay inay jiraan dhagaxaan Kalluunku ku dhalo kuwaasi oo si sharci daro ah looga dhoofiyo deegaanada Puntland kuwaasi oo ay qaataan Dalal shisheeye oo raba inay Dabar jaraan Khayraadka Puntland.
Isku soo xooriyoo Kulankaas ayaa ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan iyada oo ay dadkii halkaasi joogay aad ugu riyaaqeen ujeedka Kulankaasi.
« Nin Ganacsade ah oo Balad-wayne lagu dilay
Markab la soo Afduubay ayaa caawa la keenay Xeebta Degmada Ayl ee ka tirsan Gobolka Mudug »